Allgedo.com » Baaq iyo Cambaareyn kasoo baxay Dalladda Suxufiyiinta Qorahay
Home » News » Baaq iyo Cambaareyn kasoo baxay Dalladda Suxufiyiinta Qorahay Print here| By: allgedo.com:
Jawaabaha waa la xiray Musiibada ku habsatay Qarankii Soomaaliya waxay umadda Soomaaliya dhaxal siiyay in ay ku wayaan dad aad u badan kuwaas oo isugu jira dad shacab ah & dad Aqoonyahamiin ah, Intii bur-burkii ku habsaday umadda Soomaaliya wuxuu dalkii noqday mid amankisii aan fara ku jirin oo hubkii farha ka baxay waxaana lagu layaa Soomaaliya dad aad u badan. Waxaa in badan si dhibyar loogu dilaa dhakhatiir in badan umadda wax u soo qabtay, arday waxbarasho ku jirtay & dad magac kulahaa umadda oo wax badan u soo qabtay.
Suxufiyiin badan oo Soomaaliyeed ayaa naftooda ku waayay ayaga oo soo gudbinaya warar ka turjumaya xaqiiqada dhabta ah kuwaas oo ay waraabinayeen kumanaan Soomaaliya ah oo aduunka kala jooga.
Suxufiyiintaas oo dadaalka ay wadeen kali ah loo laynayaa waxay noqotay arin aad u yaab badan oo xataa midka dilayaa uusan waxba ka faa’iidaynin kali ah aakharo & aduun seeg ku dhacay.
Dhacdo walba dacdada ka dambaysa ayay ka sii xanuun kulushacay Ururka Suxufitiinta ku bahoobay Qorahay waxay aad uga xunyihiin dilkii fulaynimada ahaa ee sabab la’aanta lagu dilay wariyaasha kala ahaa. Liibaan Cali Nuur iyo Cabdisataar Daahir Sabriye oo u shaqeynayay TV-ga Qaranka ee SNTV iyo C/raxmaan Yaasiin Cali oo isna Agaasime iyo wariye ka ahaa Idaacadda VOD ee magaalada Muqdisho waxaan marka hore tacsi tiiraanyo leh la qaynbsanayaa dhamaan qaraabadi & ehelkii sidoo kale dhamaan Suxufiyiinta Soomaaliyeed meel ay jogaanba.
Ururka Suxufiyiinta Qorahay Media wuxuu cambaarayn & Baaqba u dirayaan dhamaan inta jecel wanaaga waxaana si weyn uga tiiraanyaysanahay Wariyaasha aan waxba galabsanin ee markasta si dhibyar loogu laynaya meelo kala duwan ee dalka Soomaaliya.
Waxaan Cambaaraynaynaa shaqsiyaadkii ka dambeeyay ama soo maleegay qarixii lala beegsaday Baar Village oo ku yaalla meel u dhow gurigii haweenka iyo Tiyaatarkii Muqdisho. dilkaas sabab la’aanta ah ee lagu laayay WariyaaL & dadka aridka ah ee aan waxba galabsanin.
Waxaa kale oo aan Cambaaraynayaa dhamaan Suxufiyiinta Soomaaliyeed oo aan midaysneeyn ayaga oo kala socda oo midba meel lagu dilaya Waxaana leenahay waa in aad mid noqotaan oo hal dalad ah yeelataan.
Ururku wuxuu baaq u diraynaa Dawladda Soomaaliya & Hay’adaha Xuquuqul insaanka in ay baadhis sameyaan cadaaladana la horkeeno dadkii ka dambeeyay falkaas foosha xun.
Ururka Suxufiyiinta Qorahay Media wuxuu Baaq u dirayaan dhamaan Ururada Suxufiyiinta Caalamka in ay Cambaareyaan, muujiyaana dareenkooda sida ay uga xun yihiin.
Ugu dambayntiintii, waxaan leenahay gacmo wada jir wax ku qabtaan inta qalinka ku dagaalamaysa waa in ay ogaadaan in ay hal cadow ah leeyihiin, waana in ay midnimadooda muujiyaan Ururka Suxufiyiinta Qorahay aad ayuu u soo dhaweynayaa midnimada & isku xidhnaanta.
Ururka Suxufiyiinta Qorahay Media.